တစ္ဆေကဖီး: September 2009
မင်းလာသာလာခဲ့ မင်းကိုငါ စောင့်နေတယ်။
မင်းပဲ ခုတ်ထစ် ပိုင်းဖြတ် ခွဲစိတ်
မင်းဟာမင်း ပြန်စစ်ဆေး ပြီးရင် မင်းလာခဲ့
မင်းပဲ နှိုက်ဆွ ဖျဉ် ဖျက်
မင်း ကိုယ်မှာ မင်းပြန်ကပ်ကြည့်ပြီး မင်းလာခဲ့
မင်းပဲ ဆက်စပ် ဖြုတ်တပ်
မင်း စိတ်ကြိုက်ကစား အားရပြီဆိုရင် မင်းလာခဲ့
မင်းပဲ မှော်ဆရာလို မန်းမှုတ်
မင်း လိုဘပြည့်အောင်ပွတ်သပ် ပြီးရင် မင်းလာခဲ့
မင်းပဲ တမိုးလုံးဖျောက်ဆိပ်လို ဖြန့်ကျက်
မင်း လက်ကုန်နှိုက်ပြီးလို့ အားလုံးသေချာပြီဆိုရင် မင်းလာခဲ့
ဆူးလေ ကနေ ကြိုက်တဲ့ကားတက်စီးလာခဲ့
ဦးခင်အောင်အေးဆီသွားမလို့ လို့သာပြော၊ စကားကြွယ်တဲ့
စပါယ်ယာလေးကအစ ဒေါသကြီးလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ကားဒရိုင်ဘာကောင်ကတောင်
၀င်ပြောလိမ့်မယ်။ အစ်ကို ထိုင်..ကားခလဲမပေးနဲ့ ဒီမှာ ကွမ်း..ဒီမှာဆေးလိပ်..ဒီမှာရေသန့်ဘူး.
ဟိုကျရင်သာ ကျနော့်ကားနဲ့ အစ်ကို့ကိုတင်လာတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ခုန ဦးခင်..ဘယ်သူ..
အဲ…အဲ.. သူ့ကို ပြောပေးပါ။ ။
၃၀၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၉ ဘန်ကောက်စံတော်ချိန် ၂၀း၅၆ နာရီ
Posted by အဝေးရောက် ပင်လယ် at 11:04 PM2comments:
သူထ အော်ကာနီးမှာ ကိုယ် အားသွင်းကြိုးကိုတပ်လိုက်တယ်
ဆန်အိတ်က တုံးလုံးပက်လက် အခန်းထောင့်မှာ
မျှော်လင့်ခြင်းတွေဟာ ရောင်ခြည်လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ ခရစ်စတယ်လ်လေးတွေလို
အားကစား သတင်းလာတာနဲ့ တီဗွီကို အော့ဖ် လုပ်လိုက်ရော
ပေါင်းရသင်းရတာ သံပုန်းတီးပြီး တောခြောက်ခံနေရတယ်
အခြောက်တိုက်မြောက်နေတဲ့ အဲဒီကျွတ်ကျွတ်အိတ် လေထဲမှာ လေထက်မှာ လေထဲမှာ လေထက်မှာ
ဝေးပြီးပျောက်သွားပြီ မျက်စေ့ နှစ်ဆုံး သုံးဆုံး တောင်မကဘူး
စင်ထွက်လာတဲ့ ကျည်ခွံတွေဟာ သာသနာပြုတွေလိုပဲ
မိုင်ပေါင်း အသောင်းအသိန်း ဝေးတယ် သို့မဟုတ် နီးတယ်
အင်္ကျီဂျိတ် အနီရောင် ၂ ချောင်း၊ အပြာနုရောင် ၁ ချောင်း၊ ဖက်ဖူးရောင် ၁ ချောင်း၊
ညကကောင်းကောင်း အိပ်မအိပ် လိုက်စစ်တဲ့ အဖွဲ့လာနေပြီ
လေယာဉ်ကိုမြေပြင်သို့ဆင်းစေခြင်း၊ လှေကားထိပ်မှ ညီညာသောနေရာ
သူ့ဇာတ်ထုပ်နဲ့သူ အမြောင်းလိုက် အမြောင်းလိုက် တံဆိပ်တွေ ကပ်ထားလိုက်တယ်
စိုက်ပျိုးရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာပေး အရည်အသွေးမြင့် သီးနှံများထုတ်လုပ်ရေး နှင့်ပတ်သက်၍
Screen မှာပေါ်လာသမျှတွေ အကြောင်သား ငေးစိုက်ကြည့်နေမိ
ဥပမာ ပြင်သစ်ပိုင်နက်မှာရှိတဲ့ မာကွန်ပြည်နယ်နဲ့တော့ လုံးဝမတူဘူး။ (တွန့်ဆုတ်)
ဘီးလုံးလေးဟာ သူ့ဘ၀တလျှောက်လုံး နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် အသုံးတော်ခံခဲ့တယ်
အထက်ကား အောက်ရှူး ဘယ်လိုတွေးခေါ်ပုံမျိုးလဲကွာ သတိဆွဲခိုင်းထားလိုက် အဲဒီကောင်ကို
မျောက်များသည် လူများနီးနီး လူများသည် မျောက်များနီးနီး သင်ယူတတ်မြောက်လွယ်ကူကြသည်
မျောက်လက်ချထားသည် ကျောက်ချထားသည် ဆိုက်ကပ်ထားသည် ထိုးရပ်ထားသည်
ပြောနေဆဲမှာ ညနေ ၆ နာရီတိတိ (ကိုယ့်နာရီမှာ ၁ မိနစ်လို) နိုင်ငံတော် သီချင်းစ, သီဆိုပြီ
အဲသလိုက ပိုကောင်းမယ်၊ စာအုပ်ထဲမှာ အမှတ်စဉ်ထိုး၍ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း
ဆရာဝန်မင်းများက ပလိပ်ကပ်ဖျားရောဂါ ဟုပညတ်၍ ထိုအနာကိုလည်း(၁၉၀၅-၁၉၀၇)
အူး….လွမ်းကြမယ် အချစ်ကလေးရယ်x x ဒါပေမယ့်လဲ…နှစ်သိမ့်စရာ ရှိသေးတယ်…x x
ကဗျာဆက်မရေးတတ်လျှင် ထည့်ချင်ရာထည့်သည့်အကျင့်ကို ဖျောက်လို့မရ
“……ဘာရေးရင်” “ ……ဘာရေးရင်” ကဗျာ… ဟုတ်လား? က, ဗျာ ဟုတ်လား? က, ပြီဗျာ ဟောဒီမှာ..
ပလို့ ဂျိ..။ ။
၃၀၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၉ ဘန်ကောက်စံတော်ချိန် ၁၉း၅၄ နာရီ
Posted by အဝေးရောက် ပင်လယ် at 11:02 PM No comments:
ချောပြောင်ပြောင် ရောင်စုံ အလုံးကလေး ကိုးလုံး အိပ်ကပ်ထဲမှာ ဗလာ ဗလာ ဗလာ
သီချင်းလေးတွေ ကောင်းတယ် ဒီနေ့လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်က
သတင်းစာ ဒီနေ့ မရလိုက်ဘူး အိပ်ပျော်သွားတာ
အရေးပေါ်အစည်းအဝေးက ဒီနေ့ကျင်းပမှာ ကုလသမဂ္ဂမှာဆိုလား ပင်တဂွန်မှာဆိုလား
ကွေးညွတ်သွားတဲ့ မခံချိမခံသာ စိတ်ကို ဒီနေ့ပဲ သားသတ်ရုံပို့လိုက်ပြီ
အခမဲ့ ဆေးတိုက်ကျွေးတာ ဒီနေ့နောက်ဆုံးတဲ့
ဒီနေ့ သူ့မွေးနေ့ မို့ ရဲတွတ်တွတ် နှင်းဆီတပွင့် ပို့လိုက်တယ်
သာမာန်အားဖြင့်တော့ ဒီနေ့ ပိတ်ရက်မဟုတ်ဘူး
သမိုင်းထဲက ဒီနေ့ဟာ အခြား အထူးနေ့တွေလိုပဲ ဘာထူးခြားမှုမရှိပဲ ကုန်ဆုံးသွား
ဟာ.. ဒီနေ့ ဆေးစသောက်ရမယ်လေ အာပါး.. မေ့နေလိုက်တာ
တုန်ခါသွားတဲ့ လှိုင်းအလျားနဲ့ အခြားတိုင်းတာရရှိမှုတွေ ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိမ့်မယ်
ဈေးမှာ ဒီနေ့ ငါးပုစွန်ရှားတယ်
ကျောင်းက ဆရာမကမှာလိုက်တယ် ဒီနေ့ အလှူငွေကောက်မယ်တဲ့
အင်း… ဒီနေ့ပဲပေါ့ ဟိုတမြန်နှစ်က ရေကြီးလို့ တာလမ်းမပေါ် တက်နေရတာ
မောင်..ဒီနေ့ ကျမနဲ့မောင်နဲ့ ဘာအမှတ်တရနေ့လဲ မှတ်မိလားဟင်..
မင်းတို့ဟာကလဲ ဒီနေ့မှတဲ့လားကွာ၊ မနက်ဖြန် လုပ်လို့မရဘူးလား
အဲဒီ ခရီးစဉ်က ဖျက်သိမ်းထားတယ်လေ ဒီနေ့ မရှိဘူး
မြေပုံအဟောင်းနဲ့ အရှိတရားသစ်တို့ဟာ ကွာဟသွားကြမှာပဲ၊ ဒီနေ့လိုပေါ့
နင်တို့ ဘဘ ဆုံးသွားတာ ဒီနေ့ ဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့်ပြီ
ခွဲစိပ်ရမယ့် အစီအစဉ် ဒီနေ့ ဘယ်နှစ်နာရီ စမလဲ
ဒီနေ့မြန်မာ ကဗျာလောကမှာ ခေတ်ပေါ်နဲ့ခေတ်ပြိုင် နှစ်လုံးထဲကပ်ရှုပ်နေကြတယ်ဆိုပဲ
ဆေးသုတ်မယ့်အဖွဲ့တွေ ဒီနေ့စ,၀င်မှာနော် လိုအပ်တာပြင်ဆင်ထား
သူကမျက်နှာသေနဲ့ ပြောသွားတယ် ဒီနေ့ သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။ ။
၃၀၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၉ ဘန်ကောက်စံတော်ချိန် ၁၀း၃၁ နာရီ
Posted by အဝေးရောက် ပင်လယ် at 10:45 PM2comments:
Posted by Moe Hlaing Nya at 8:50 PM3comments:
Posted by အဝေးရောက် ပင်လယ် at 10:47 PM6comments:
လေ၊ ကျင်ကြီး၊ ကျင်ငယ်၊ ချောင်းဆိုးလိုခြင်း
အန်လိုခြင်း၊ ကြို့ထိုးလိုခြင်း၊ အိပ်လိုခြင်း
မမြစ်ရာ၊ မအောင့်ရာ။ အောင့်လျင်
အကာအစွပ်မပါပဲ မနမ်းပါနဲ့-စသဖြင့် စသဖြင့်တွေ
တွေ့ဖူးတယ် တ၀က်ပြိုကျနေတဲ့ အခုလိုလူ
လမ်းသွားရင်း ပိုက်ဆံအကြီးဆုံးအတန် ကောက်ရနိုင်သလိုပါပဲ
မထင်မှတ်ပဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိအောင် ဖိနပ်သဲကြိုးပြတ်သွားနိုင်တယ် ဘယ့်နှယ်လဲ။
ကိတ်မုန့်လို၊ ၀ီစကီလို၊ အရည်းကြီးလို၊ ဇီးသီးလို
အလိုပြည့်စေမယ်ပေါ့ သောကြာနေ့တိုင်း။ ။
လှိုင်းသစ်မဂ္ဂဇင်း ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီလ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
Posted by အဝေးရောက် ပင်လယ် at 8:56 PM 1 comment:
ကိုအောင်ဝင်း (ပင်လယ်မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ) အတွက်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း
တေးရေးဆရာ (ဝေးခဲ့ပြီ ပန်းခရမ်းပြာ) ၀တ္ထုတို ဆောင်းပါး များရေးသားခဲ့သူ
ပင်လယ်မဂ္ဂဇင်း (၁၉၉၀ များ) အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဝင်း ခေါ် ကိုနော် ( Art for No Sake) သည်
ယနေ့ (၂၃ စက်တင်ဘာ၂၀၀၉) နံနက်၎း၃၀ အချိန်က ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နေအိမ်တွင်
အသည်းရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ကြောင်း ကြားသိရသည့်အတွက်မိသားစုနှင့်ထပ်တူ ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါသည်။
၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ် တအုပ် ထုတ်ဝေရန်စီစဉ်နေဆဲ ယခုလို ကွယ်လွန်သွားခြင်းဟုသိရ။
အနုပညာဓါတ်ခံအားကောင်းသော ကြယ်တပွင့် ကြွေလွင့်ရလေပြီ။
မြေကြီးငဲ့ အထူးဂုဏ်ပြုအပ်သောဧည့်သည်တော်ကြီးအား ကောင်းမွန်စွာ လက္ခံ ပါဖိ
(ယိတ်စ် သို့ အော်ဒင် ၏ ကဗျာမှ)
Posted by အဝေးရောက် ပင်လယ် at 11:24 AM2comments:
ဖလော့ရင်စ့်ဒင်္ဂါးတစ်ထောင် မပေးနဲ့ ငါက စပင်နိုဇာ
Posted by mgphonemyint at 6:13 PM4comments:
မင်းက တချက်တချက် ဒီလိုထအော်ရင်
ငါ့မှာ ရင်တုန် ပန်းတုန်နဲ့ ကိုယ့်လက်ဖျံရိုး ကိုယ့်ငုံကြည့်နေရ
ငါတို့ဟာ ဗဟုဝါဒ သက်ဝင်ယုံကြည်ကြတာမဟုတ်လား
အသစ်အဆန်းဆိုတာ မင်းလဲ မြည်းကြည့်ဘူးပြီပဲကွာ
တံဆိပ်သစ်တွေဟာ ဒီရာစုသစ်ထဲ သိပ်များတဲ့ အဟောင်းထည်တွေ
ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ ဝန်ပိုတွေနဲ့ လေးလံလွန်းနေတယ်
ကမ္ဘာမြေတနေရာမှာ မတရားမှုဆိုတာ အသေအချာရှိခဲ့တယ်
ငါတို့ဟာ ဒါတွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေလိုက်လို့ မဖြစ်ဘူး
မင်းခါးကြားမှာဓါးမြှောင် ငါ့နောက်ကျောမှာက ဆောင်ဓါး
လာ. . ခရီးအတူသွားတာပေါ့
မင်းက ဖေဖော်ဝါရီမှာ သွေးနွေးသလို
ငါကလဲ နိုဝင်ဘာမှာ သွေးဆူလာတတ်တယ်
နာဖျားမှုတွေက ငါ့တို့ဘဝထဲမှာ ပြည့်နှက်နေတာမဟုတ်လား
ကမ္ဘာမြေအတွက် တဖဲ့စာလောက်ဖြစ်ဖြစ် ငိုကြွေးပြီး
Posted by mgphonemyint at 6:10 PM 1 comment:
အရူး ရှယ်လီကို သတိရမိတယ်။
အရူးရှယ်လီ*ကို သတိရတယ်။ ။
Posted by အဝေးရောက် ပင်လယ် at 10:37 AM 1 comment:
လူ့ဘ၀ ရခဲ့တဲ့ နှစ်များ
သုခိ အတ္တာနံ ပရိဟရ န္တု ရခဲ့တဲ့နှစ်များ
သမီးတစ်၊ သားတစ် ရခဲ့တဲ့နှစ်များ
ဖြစ်ဖြစ်မြည်အောင် ဖြစ်ခဲ့ ရခဲ့တဲ့နှစ်များ
ဘာမှ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး ရခဲ့တဲ့နှစ်များ
ရခဲ့တဲ့ နှစ်များမှာ ပြသနာကောင်
ရခဲ့တဲ့နှစ်များမှာ ကလေး၊ အရူး၊ သဘင်သည်
မိတ္တူတွေကူးခဲ့၊ ရေကူးပြိုင်ပွဲတွေ ၀င်ကူးခဲ့
မြစ်ကြီးငါးသွယ်၊ ပင်လယ်၊ သမုဒ္ဒရာကူးခဲ့
လမ်းမပေါင်း ရာထောင်ကူးခဲ့၊ တံတားအစင်းစင်းကူးခဲ့
အိုး မိုင်ဂေါ့တွေနဲ့သာ တွေ့ခဲ့ရ
Posted by အဝေးရောက် ပင်လယ် at 11:07 AM 1 comment:
ခင်ဗျားနဲ့ သက်ဆိုင် မဆိုင် ကျွန်တော်နဲ့ သက်ဆိုင် မဆိုင်
မိုးခြိမ်းသံကြောင့် ကားတွေ အလန့်တကြားထအော်တယ်...
လူတွေက ဖာသိဖာသာ...သင်ခန်းစာတစ်ရပ် မနွေးထွေးကြောင်း
ကမ္ဘာကြီးမီးလောင်ရင်..ဘာတွေချ နင်းသင့်ကြောင်း မဆွေးနွေးကောင်း ဆွေးနွေးကောင်း
အလဲ အရမ်း မြန်တယ်
မနေ့ကဟာ ဒီနေ့ကမှာ ခိုအောင်းထားတယ်..
ကောင်မရယ် ငါသိပ်ကြိုက်တဲ့ ချိတ်ထမီလေး
စောင့်ကြည့်မနေနိုင်ဘူး မနေ့က ဂျင်းဘောင်းဘီ
ပြတ်သွားတဲ့စွန်နောက် တောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့ သူငယ်
ညအခါ ကာလသားဟင်း ချက်မစားတော့ဘူး
မိုက်တယ်ကွာ ကောင်မလေး အလန်းလေး အလန်လေး
ထ ထ အော်တဲ့ နာရီ
ည ည ဖားအော်သံမကြားဘဲ ဖားသား စားခဲ့တယ်
စကားလုံးတွေ အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဆီ လွန်းထိုးမနေ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ရှင်းပြခြင်းသည် ထပ်ခါထပ်ခါ
လဲကျခြင်းနဲ့ သေဖော်ညှိမညှိ နောက်ဆုံးတင်သွင်းလိုက်တဲ့ စာတမ်းထဲ
နောက်ဆုံးဝင်လာတဲ့ ထိုးနက်ချက်ထဲ နောက်ဆုံးလူ နောက်ဆုံးစံ/ခံလိုက်ရမလား
နောက်ဆုံးက နောက်ဆုံးစကားပြောဖို့ နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့အထိ
ထီးထီးကြီး ရပ်နေတဲ့ ကုက္ကိုပင် တစ်ရွက်ချင်းကြွေ တစ်ပွင့်ချင်းသေ အသီးတွေ
ခွေးတွေက ထ ထ ဟောင်တယ်
သန်းချီပေမယ့် ပြီတီတီ ရီသွားတယ်
နဲ့ ရပ် ခတ်လို့ ရသတဲ့လား
ဒီနေ့ ရှေးမြန်မာကဗျာထဲက စကားလိမ်စာသားတွေဖတ်ရတယ်
လေထိုးကျွတ်ဖာ ဘေးက ခလုတ်ခလေး နှိပ်ပေးပါခင်ဗျား
ရသမျှကို မပြင်ဆင်ဘဲ ပေါ်သမျှဆက်တိုက်ရေး
ဟေ့ ဟောက်သံ သိပ်မပေးနဲ့
ပုဂ္ဂလိကတွေ သိပ်ဆန်တယ် အများဆိုင်နာမ်
၀ါကျဖွဲထုံး ဂုန်းပိုးစီးသွားတယ် ငါးမရပေမယ့်
ရေချိုးမပြန်ခဲ့ဘူး စကား ပုံထဲ စကားလုံးတွေလိုက်ရှာခဲ့တယ်
ပန်းချီကားထဲ ဆေးစက်က ဆွဲကြိုးချသေသွားတယ်
နံပါတ်မှားနေတဲ့ ခါးက နာမည်မှားခေါ်သွားတယ်
အလုပ်မရှိ အလုပ် ရှာ ကြံ လုပ်တယ်
အနုပညာထဲ ဘာတွေတပ်ဆင် အနုပညာထဲ အနုပညာ တပ်ဆင်
ပြင်ဆင်ချက်ထဲ ပြင်ဆင်ရင်း ကွင်းဆင်း လမ်းဖြတ်ကူးနေတယ် မီးစိမ်းပေး
အလိုအလျှောက်သိ ကိရိယာက မီးနီ မီးစိမ်း မီးဝါ လမ်းသွားလမ်းလာများ ခင်ဗျား
“သင့်ငွေကြေးများကို ယခုမှစ၍ သက်သာစေနေပါသည်” စာတန်း
စမ်းသပ်ရင်း စမ်းသပ်ရင်း စက်သံတွေ ညံသွားတယ်
ပျက်နေတဲ့စက်ဟာ ဖျက်နေတဲ့စက်ဟာ တက်ကျိုးလို့ လက်ထိုးလှော်ခဲ့ရ
ပြေး ပြေးပြီလား ဝေး ဝေးနေတဲ့ နေရောင်တွေ။ ။
Posted by အဝေးရောက် ပင်လယ် at 2:07 PM2comments:
Posted by Moe Hlaing Nya at 11:21 PM2comments:
ခရုခွံကောက်ရုံသက်သက် ။ ။
( ဒီနေ့က မိုးတွေအရမ်းရွာနေတယ်လေ. . . ဒီမှာ . . အဲဒါကြောင့် ဒီကဗျာကိုအလောတကြီးဖော်ပြခိုင်းမိတာ . ။
ကျနော့မှာ သိမ်းထားတဲ့တောင်ပံတွေလည်းမရှိဘူး လူထူထူမှာ လေလွင့်ပြဖို့ အမွှေးအတောင်တွေလည်းမရှိပါဘူး လိုအပ်ရင် အောက်ချင်းငှက်လို ကဗျာဆီပျက်ကျချင်တာပါ . . . ။ )
Posted by mgphonemyint at 1:05 AM4comments:
ကဗျာဆရာ မောင်ချောနွယ် ကွယ်လွန်ခြင်း ၇ နှစ်မြောက် လွမ်းဆွတ် အောင့်မေ့ခြင်း အစီအစဉ်တင်ဆက်မှု
ကိုချော အုတ်မြစ်ချခဲ့တဲ့ “ပင်လယ်” ရဲ့ဝိဥာဉ်ကို ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းထားတဲ့ ဟောဒီ အင်တာနက်
စာမျက်နှာပေါ်ကနေ ကိုချော ရှိ၊ ဖြစ်၊ တည်နေရာ ဌာနကိုမှန်းဆတိုင်တည်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာ ခရီးကြမ်းကြီးကို ဒရွတ်တိုက် ဖြတ်သန်းခဲ့ရာ ကာလတွေ၊ တကိုယ်ရေ မအောင်မြင်မှုရဲ့ တတိတိလှိုက်စားမှုတွေ၊ ကဗျာဆရာရင့်မကြီး ဖြစ်ကာမှ မြို့ပြရဲ့တချို့ညတွေမှာ ကျောချစရာ တနေရာလေးအတွကတောင် အံကြိတ် တက်ခေါက် ခဲ့ရတာတွေ၊ ပြန်ပြောပြစရာ မကောင်းတဲ့
အကြောင်းမလှမှု အထောင်အသောင်း ကြားက ဖူးပွင့်ခဲ့တဲ့ ကဗျာ အဖူး အငုံ အပွင့် အဆင့်ဆင့် တို့ရဲ့ တင့်တယ်မှု ကြောင့်ပဲ “မောင်ချောနွယ် ဘယ်တော့မှ မသေ…” ဆိုတဲ့ အဆိုစကားတရပ် ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာ ကြီး ငယ် ရွယ် လတ် တို့ကြားမှာ အသေအချာခိုင်မာ တည်တံ့ခဲ့ပါပြီ။
အဝေးရောက် ပင်လယ်မှ ကိုချော ကွယ်လွန်ပြီး၊ ၇ - နှစ်မြောက်နေ့မှာ စွမ်းသလောက်ကလေးနဲ့
ကိုချောကို အောင့်မေ့ တမ်းတခြင်း အစီအစဉ်ကလေး တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ကိုချောရဲ့ တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အနုပညာ ကဗျာ အမွေအနှစ်တွေကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက်..
Posted by mgphonemyint at 12:15 AM No comments:
မြန်မာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာ ရယ်လို့ ယနေ့မြင်နေရတဲ့ အခင်းအကျင်းမျိုး ဖြစ်လာဘို့ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၃၀
ကျော်ကျော်လောက်က ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ကဗျာသူရဲကောင်း သုံးဖော် အောင်ချိမ့် ဖော်ဝေး မောင်ချောနွယ်
တို့ရဲ့ သစ်ရွက်အသေများပေါ်က ရက်စက်သောဂီတ မူရင်းစာအုပ် မျက်နှာဖုံး နှင့် နောက်ကျောဖုံး၊
( ပန်းချီ မြိုးညွန့် ခေါ် မောင်ဒီ ၏လက်ရာ)
Posted by mgphonemyint at 12:13 AM 1 comment:
သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ ရုပ်ရှင်မင်းသား
သူဟာ အများသိ ကဗျာဆရာပေါ့
ကဗျာတွေ အများကြီး ရေးခဲ့တယ်။
ငါတို့ ကဗျာတွေ အများကြီး
ငါ့ ကလောင်ကို ခဏချ
ငေးတိ ငေးရာ ငေးရတယ်။
သွေး တစက် တစက်နဲ့
ဘ၀ တဆတ်ဆတ် ကတုံကယင်နဲ့
နောက်ဆုံးတော့ ပါးလျား သေးသေးလေး
သေးသေးလေး အစက်လေး တစက်
အဲဒီ အစက်လေး တစက်အထိ
‘ သူငယ်ချင်းသေရင် ကိုယ်ငိုမှာပါ’ ဆိုတဲ့
မင်းသေတော့ ငါ ငိုမထွက်ခဲ့ပါ
ငိုမယ်ဆို ငိုစရာတွေ မဆန့်မပြဲပဲ
ငါတို့ရဲ့ ပက်ပက်စက်စက် ဘ၀တွေမှာ။
မင်း အပူအပင်ကင်းစွာ အိပ်စက်ရပါစေသား။
“ မင်းတို့ ပြောတော့ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း
ခု.. ဘယ်မှာရှိတော့လို့တုန်း” တဲ့
မိုးတွေ ရွာပေါ့။ ။
( ရနံ့သစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၃ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။)
Posted by mgphonemyint at 12:11 AM No comments:
ပလပ်တွေ လဲရမယ်၊ မီးပျောက်ပျောက်သွားလို့၊
' အခက်ကြီးထဲ ခုန်ချ ' ။
မိုက်ကနဲ မိုက်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့၊
မောင်ချောနွယ် တခါတလေ ဒုက္ခတွေ့တယ်၊
မောင်ချောနွယ် တခါတလေ အရက်မူးတယ်၊
အလောင်းထုပ်ထားတဲ့ အ၀တ်ဖြူကို ဖြည်ပြတော့၊
ရေတိုင်ကီ ဘာဖြစ်လို့ ရေဆူဆူနေတာလဲ
ကိုယ်ပူလိုက်တာ တရာ့သုံး တရာ့လေး
အဖျား တခါမှ မကျသေးဘူး
တချို့ သူမသေခင်ကတည်းက သစ္စာဖောက်ခဲ့ကြ
တချို့ သူသေပြီးမှ သစ္စာဖောက်လိုက်ကြ
ကဗျာဆရာတွေ ငိုကြ၊ တယောက်ကိုတယောက် လှမ်းကြည့်ကြ
တယောက်နဲ့တယောက် တားကြ၊ ဆွဲကြ၊ တွဲထူကြ
နောက်ဆုံးမှာ ဘာသံကြီးလဲ မသိ
မောင်ချောနွယ်(၁၉၄၉ - ၂၀၀၂)
အခက်ကြီးထဲ ထိုးချလိုက်တော့မယ်။ ။
ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၀၄ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by mgphonemyint at 12:09 AM No comments:
၂၀၀၂ စက်တင်ဘာ ပထမပါတ် ရထား
( ၅၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၉ ညသို့..)
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဝင်း အရပ်အခေါ် ရေခဲတိုက် ထဲ လှမ်းဝင်လိုက်တာနဲ့ မျက်လုံးတွေကဝေသီပြီး ဘာကိုမှ
ကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ဘူး၊ သိတဲ့မျက်နှာတွေကိုလဲ အပြုံးအ, နဲ့ပဲ တုံ့ပြန်နိုင်တယ်။ ကိုချောရုပ်ကလပ်
ပြင်ထားရာဘက်ကိုချက်ခြင်း မသွားဖြစ်ဘူး။ တချက်ဝေ့ အကြည့်မှာတော့ မမမြင့် နေခြည် နဲ့ မိုးဇော် တို့ကို
မသဲကွဲလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ လူတိုင်းရဲ့မျက်နှာမှာ နှမျောတ သ ကြေကွဲခြင်း တွေ လျှံငြီးနေတယ်။
လက်ကမ်းကဗျာ စာရွက်လေးတွေ အထိမ်းအမှတ် အလွမ်းစာစီ ပင်းန်ဖလက်တွေ လက်ထဲကို တခုပြီးတခု၊
လှသန်းက တခုခုလှမ်းပေးတယ်။ ကိုပြည့်တို့ဟိုမှာလို့မေးဆတ်ပြတယ်။ ဇေယျာလင်းတို့ကောလို့မေးလိုက်
တယ်၊ စောစောက ကိုချောနားမှတွေ့လိုက်တယ်..လူငယ်ကဗျာဆရာ တယောက်က၀င်ဖြေတယ်။
အီး ကနဲ ငိုသံ.. မမမြင့် တိုင်တည်သံ.. ရင်ထဲမှာ ဗလောင်ဆူပွက်နေတယ်။ မြင်ကွင်းကတော့မြင်နေကျ
အသုဘရှု မြင်ကွင်းတခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်..ဒါက ကိုချောလေ..။
တယောက်ယောက်က ကိုချောဆီ ဦးဆောင်ခေါ်သွားတယ်။ မငိုမိအောင် စိတ်တင်းထားရတယ်။ မမမြင့် က
မြင်တာနဲ့ ခင်အောင်အေး လာပြီလေ ကိုချောရဲ့လို့မချိတင်ကဲ အော်ငိုပြန်တယ်။ အံကြိတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို
နာနာ ဖိ ကိုက်ထားရတယ်။ မြော်လင့်ထားပြီး အဖြစ်အပျက်မြင်ကွင်းတွေပေမယ့် ရင်ခေါင်းထဲက လှိုက်တက်
လာတယ်၊၊ မိုးဇော်ရဲ့ လက်မောင်းအိုး ကိုဖိညှစ်ပြီး မှာစရာစကားတွေအားလုံးကို အသံတိတ် ပါးလိုက်တယ်။
မျက်ရည်ဝေသီ မျက်လုံးနီနီ တွေက ဟုတ်ကဲ့ စိတ်ချပါ အကို.. လို့ အသံမဲ့ တုံ့ပြန်ပြီးသား။
အချင်းချင်းတယောက်နဲ့ တယောက် အသံမဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ပဲ ပြောဆိုနားလည်လိုက်ကြတယ်။ ကိုစစ်..
ဘာလိုအုန်းမလဲ ဆိုတော့ ဘီအမ် တစင်းလောက် ထပ်ဆွဲ ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်တဲ့၊ ဒါဆိုလဲ လုပ်လေ
ကိုစစ်တင် လက်ထဲကို ပိုက်ဆံ တထပ်ထည့်လိုက်တယ်။ လှစ်ကနဲ ပျောက်သွားပြီး ခဏနေတော့ ခပ်လှမ်လှမ်းကနေ လက္မ ထောင်ပြတယ်။
ကိုယ့်ထက် ဖြေမဆည်နိုင် ပူဆွေးသူတွေ အမြောက်အများကြားထဲမှာ မပူရုပ်ဟန်ဆောင်လုပ် မျက်တောင်
သူငယ်ချင်း ရဲဘော် ရဲဘက်ကြီးတွေလေ..။ သူတို့တောင် အိနြေ္ဒ ဆည်နိုင်သေးတာ..။ လူငယ်တွေ ကတော့
တယောက်ကိုတယောက်ထိန်းလို့ တယောက်ကိုတယောက်ဖြောင့်ဖျလို့။ မချိတင်ကဲ..။
အချိန်ကျ တော့ ဒူ ကနဲ ကြေးစည်သံ နဲ့ စီကနဲ ငိုရှိုက်သံ တွေ ကြွက်ကြွက်ဆူသွားပြန်တယ်။ ကိုချောရဲ့ ကြွင်းကျန်ရစ်တဲ့ ရုပ်ကလပ်ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ နိဗ္ဗာန်ယာဉ် နောက်မှာ အစီအစဉ် အတိုင်း ကားတွေ
တစီးပြီး တစီးလိုက်ပါလို့ ကိုချောရုပ်ခန္ဓာ ကြီးကို နောက်ဆုံးခရီးပို့ဆောင်ကြတယ်။
မိမိ စီးလာတဲ့ ကားကို ပုစွန်တောင် တောင်လုံးပြန် ကနေ ပြန်လှည့်ခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုမှ နောက်နေ့ရွှေ့လုပ်
လို့ မရတဲ့ အလုပ်တခု တန်းလန်းနဲ့မို့ ရုံးဆင်းချိန်မတိုင်မီ ပြန်ပြေးခဲ့ရတယ်။ အဲဒီကမှ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း တွေ ရယူကာ သံလျင် သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းကို ဂမူးရှူးထိုးပြေးရပြန်တယ်။
၇ နာရီလောက်မှ ကိစ္စ တွေ ပြတ်၊ အိမ်ပြန်ရေမိုးချိုး ကားကိုနာရီဝက်အတွင်းပြန်လာဘို့ မှာလိုက်တယ်။ ကားပေါ်တက် လက်ကနာရီ ကိုကြည့်တော့ ဂ နာရီ ခွဲ နေပြီ၊။ အတူသွားဖို့ ချိန်းထားခဲ့တဲ့ ကိုသိဒ္ဓတ္ထ ကိုလှမ်းချိတ်တော့ ရောက်ပြီး လို့ အိမ်တောင်ပြန်ရောက်နေပြီတဲ့။ ကိုချောရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုရှိရာ
မြောက်ဒဂုံ အိမ်သို့။ သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဈေး ကျော်တော့ ကားကအရှိန်မြှင့် လာတယ်၊ လေကတ၀ူးဝူး..၊ လက်က ဂျာကင်အိပ်ကို အမှတ်တမဲ့ စမ်းမိတော့ မာမာ အခေါက် ကလေးတခု..၊ အိမ်ပေါ်ကဆင်းကာနီး ကမန်းကတန်း ဆွဲထည့် လာခဲ့မိတာ..။ နှစ်ခေါက်ချိုး ကဗျာစာအုပ်လေး..
စက်တင်ဘာ ပထမပါတ် ရထား
ကဗျာ အတွင်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်လိုက်တယ်
ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားကို ဖွင့်လိုက်တယ်
ကားပေါ်မှာ တရှုံ့ ရှုံ့ ငိုပါတယ်၊ ရှိုက်ကြီးတငင် အားပါးတရ ငိုချလိုက်ပါတယ်။ ။
၂၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၉
Posted by mgphonemyint at 12:08 AM No comments: